The future of hotel Food & Beverage – post COVID-19 | Culinary Travel News
Ikhaya » IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko » Ikamva lokutya kunye nesiselo sehotele- iposi i-COVID-19
Ikamva lokutya kunye nesiselo sehotele- iposi i-COVID-19
Julayi 21, 2020
Umoya wotshintsho awuzange uvuthe kabuhlungu kangako-ukukrazula nokukrazula kwiindawo esihlala kuzo, kumashishini ethu, nakubomi bethu-ukondla ukuphazamiseka phakathi kwesiphithiphithi kunye nokushiya izigidi zabantu zixhelekile.
Umzi mveliso wokutya neziselo ubethwe kakhulu ngokukodwa yile Covid-19 isaqhwithi. Imisebenzi yesiqhelo yokutyela iye yema emhlabeni wonke, kwaye amashishini amaninzi kuye kwanyanzeleka ukuba enze iminikelo yawo ukuze aphile. Kuphela ziivenkile ze-pizza kunye nezinye iindawo zokutya ezifanayo esele zixhotyisiwe ukuhambisa kunye nokuzalisekisa inkonzo yokuthwala eziye zaphuma koku kungaphazamiseki. Kwisininzi, nangona kunjalo, ibe yintlekele epheleleyo. Kwaye, ngelishwa, iivenkile ezininzi zivaliwe ukuba zingaze zibuye.
Ngeli lizwe ngoku lijamelene nenye yeengxaki zoqoqosho ezirekhodiweyo, kwaye izigidi zabantu kumzi mveliso wethu baphulukana nemisebenzi, zonke izinto zibonisa ukuba iziphumo eziyinyani zengxaki ye-COVID-19 azikavakali, kwaye iinguqu ezininzi zenyikima ezisezayo - kwezentlalo nezoqoqosho.
Oku kuthetha ntoni ngekamva le-F & B? Uluhlu olungezantsi zizimbinana nje zemiceli mngeni, imikhwa kunye neentshukumo eziphambili zeshishini endilindele ukuzibona zilandela le ntlekele ingazange ibonwe.
Ukutshintsha ukuthanda kukujolisa
Ukulandela ubhubhane, ndiyakholelwa ukuba intengiso yokutya kakuhle iya kuhlala inyuka. Ukutya kunye nokuhlala unesazela kuya kuba yinxalenye eyomeleleyo yokutya kushishino lokutya, kwaye amashishini amaninzi aya kuthatha indlela eluhlaza kunye nozinzo ngakumbi ekusebenzeni kwawo.
Imfuno yeshishini eliluhlaza nelizinzileyo linokubonwa kwindlela abahlali abahlangane ngayo ukuze baxhasane ngexesha lobunzima be-COVID-19. 'Ukukhula kwendawo' kunye 'nokuthenga indawo' zizinto ezimbini eziphambili eziye zavela kula maxesha anzima, kwaye ziya kuqhubeka nokukhula ekuthandeni njengoko abantu bethandana nolu nxibelelwano lutsha ebomini babo.
Abantu baphinde bavuka kwinto yokuba nayiphi na imizamo eluhlaza yokusindisa iplanethi ekugqibeleni ilingana nomzamo wokuzisindisa. Baye baqonda ukuba, ukuze siphile ubomi obuphucukileyo obuphucukileyo ixesha elide, kufuneka siziphathe kakuhle kunye nendawo esihlala kuzo. Impilo kunye nokhathalelo kufuneka zize kuqala.
Ngale nto engqondweni, ndibona ukunyuka kweesetyhula zeemodeli zeshishini kunye nokuvuselelwa kwabantu 'babuyela kwiziseko,' uninzi lwamkela amazwe abo, besebenzisa ukutya njengamayeza (ngakumbi amayeza kunye nemifuno), kunye nokufunda ukuphila ngaphandle kwale mihla iteknoloji. Kule meko, impilo-ntle iya kuba yinto ephambili kwaye ithandwe kuwo onke amanqanaba oluntu. Ayisayi kuphinda ijongwe njengendawo yokugcina abantu abakhethiweyo.
Ukulandela le ngxaki, ndiyakholelwa ukuba uninzi lwabantu luya kukhetha ukonyusa ulonwabo lwabo ngokukhokelela kwindlela yokuphila esempilweni- endaweni yawo nakuphi na ukutya okungenasempilweni kunye nemikhwa yokusela abanokuba benayo ngokutya okungcono. Ukupheka ekhaya kunye nokutya ezitalatweni kuya kuba ngabona baququzeleli baphambili bolu tshintsho.
Impembelelo yetekhnoloji kwinkonzo
Itekhnoloji ingene phantse kuzo zonke iinkalo zobomi bethu. Akunakwenzeka ukuba usuku luphele ngaphandle kwe-gizmo entsha okanye igajethi efike kwimarike kunye nesithembiso sokuhambisa amanqanaba amakhulu ngakumbi entuthuzelo, lula, ulawulo kunye nonxibelelwano. Kwaye itshintshe indawo yokutyela ngokumangalisayo.
Namhlanje, abathengi banokwenza phantse nantoni na ngee-smartphones zabo-ukukhangela iindawo zokutyela, ukubhala uphononongo, iitafile zokubhuka, ukubukela iimenyu, ukubeka iiodolo, nokwenza intlawulo ngeebhanki okanye nge-cryptocurrency.
Itekhnoloji yelifu kunye nokufunda ngomatshini ii-algorithms zinokuphucula ukusebenza kwayo nayiphi na indawo yokutyela kunye nokuqinisekisa ukuba iinkonzo zilunge ngakumbi ukuhlangabezana neemfuno zeendwendwe. Ubukrelekrele bobugcisa buya kuthi buxhaphake ngakumbi kwishishini lethu kule minyaka imbalwa izayo- kwaye ndiyayibona isisiba yeyona nto iphambili kwezolonwabo ngoku.
Iya kuyitshintsha kakhulu indawo yokutya ekhaya. Ngobomi bethu buya buxakeka kwaye kunzima nokulawula, ukulungeleka kuya kuthatha ukupheka kwasekuqaleni. Ukuhanjiswa kokutya, ukutya okulula xa uhamba, ukutya okubandayo, kunye neekiti zokutyela zonke ziya kuba yimfuno ephezulu. Ngokudityaniswa kweDeliveroo kunye neAmazon, isiCwangciso-qhinga seBlue Ocean abasamkelayo siya kulawula icandelo lokuhanjiswa kokutya.
Imiba yezentlalo nezoqoqosho echaphazela ishishini
Njengokuba iinkokheli zeshishini zilandela iimodeli ezingabizi mali, iinkampani zehotele ziya kuthi emva koko zityalomali kancinci kwimisebenzi ye-F & B kunye nabasebenzi abanxulumene noko, kunye neenkqubo ze-F & B zinokuncitshiswa ngokubanzi.
Iindawo zokutyela ezikhawulezayo kunye neenkonzo ezikhawulezayo ziya kuthatha indawo yentengiso ezimeleyo, nganye inezinto ezincinci zabasebenzi- kwaye zifuna izakhono ezincinci- kodwa zisabonelela ngamava okutya afanelekileyo kumacandelo abo ahambelana noko.
Ukukhuphisana, iihotele ziya kuthi gqolo zisebenzisa ii-oveni ezinesantya esiphezulu, ubuchwephesha be-sous vide, kunye nezinye oomatshini bokupheka kunye neendlela ezinikezela amanqanaba okusebenza ngendlela efanayo ngelixa yenza lula iinkqubo zokupheka, ukuvumela iikhitshi ezincinci, kunye nokufuna abasebenzi abancinci.
Ukukhawulezisa iimodeli ezinjalo iya kuba yinto yokuba ukufunyanwa kwabasebenzi abasemgangathweni kuya kuba nzima ngakumbi - ngakumbi kumacandelo aphakathi ukuya kwinqanaba eliphezulu. Izizukulwana ezincinci azifuni ukwenza umsebenzi wasemzimbeni, ngeyure engabalulekanga, ngemali encinci. Bakhetha kakhulu ukwenza ishaneli ye-YouTube okanye umdaniso kwiTikTok yomkhosi wabalandeli.
Kananjalo, icandelo lokutyela elinobunewunewu liya kuba yeyona nto iphambili- ngenkonzo yetafile ekhokelwa ngabasebenzi abanesakhono, abanolwazi, kwaye abanomdla kubugcisa babo. Abapheki beMicrosoft Star bazakufikeleleka nge-1% yokulawula iplanethi. Iindawo zokutyela eziphezulu njengoko sizazi ziya kuba yinto yexesha elidlulileyo, zikhunjulwe kuphela zimbalwa, isitayile seSnowpiercer.
Bangaphendula njani iivenkile zokutyela?
Emva kokuba ndiphuhlise amakhulu eekhonsepthi-kwaye ndasebenza ezimbalwa-kuwo wonke umsebenzi wam, ndibona ngokucacileyo isidingo sombono wokutyela ibha egxile ekutyeni kwasesitalatweni nakwiziselo ezenziwe ngobugcisa. Ndiyakholelwa kakhulu ukuba i-F & B kwiihotele izakuqala ukunxibelelana ngakumbi noluntu lwasekhaya, ngakumbi inkcubeko yokutya ezitalatweni, inike iindwendwe ithuba lokonwabela ukungcamla okwenyani kwendawo nganye.
Ngokuqinisekileyo oku kuya kuba njalo kwiihotele ze-ASAI, uhlobo olutsha lwendlela yokuphila yaseDusit yabahambi abanomdla weminyaka eliwaka, eyilelwe ukudibanisa iindwendwe ezinamava okuntywiliselwa endawo kwiindawo ezinodlamko. Ipropathi yokuqala ephantsi kophawu lucwangciselwe ukuba ivulwe kulo Septemba ngo-BangkokIdolophu yaseChinatown eyaziwayo.
Ukulandela ingxaki ye-COVID-19, intengiso iyonke iya kuqhutywa ngamaxabiso kunanini na ngaphambili, kwaye abathengi banengeniso encinci yokulahla, ukutya okufikelelekayo kuya kuba yimfuno ephezulu. Abantu baya kujonga amava exabiso elongeziweyo-into enokuthi izise ukuthembeka kwi-brand-kwaye iihotele kufuneka ziphendule ngokufanelekileyo.
Ngokumalunga nokwenza uphawu, oku kuya kubaluleka ngakumbi kunangaphambili - ngakumbi xa kufikwa ekuqiniseni inzuzo yokhuphiswano.
Uphawu lwentengiso aluyi kuqinisekisa kuphela abantu ngococeko nokhuseleko lwepropathi, kodwa luyakunceda abathengi ukuba baveze izimvo zabo kwezentlalo nezopolitiko.
Iihotele kunye neeresityu zihlala zingathathi cala ngokungathandabuzekiyo kwezopolitiko. Oku kuzakutshintsha, kwaye iinkampani zokutyela ezinophawu kunye neenkampani zehotele kuya kufuneka bayimele ngokuqinileyo into abakholelwa kuyo.
Cinga ukwanda kokucaca kwibhodi yonke - ukusuka kwityathanga lonikezelo kunye nemvelaphi yokutya, ukuya kwezentlalo nakwezopolitiko. Ihlabathi langomso, eliya kumlinganiso ongcono wamalungelo, lijamelene nedabi lamagunya-abanazo nabangenazo. Abathengi baya kujonga ngokusondeleyo kwiikhampasi zabo zokuziphatha, kwaye baya kuthenga kuphela kwiimpawu abanokuzithemba kunye nazo.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ngoku siphila kwimarike eqhutywa ngamava apho abantu bathenga iimveliso okanye iinkonzo ukuze bazive ngendlela ethile.
Ukubonelela ngamagumbi eendwendwe akumgangatho ophezulu, ukutya, kunye neziselo akwanelanga. Abathengi bafuna ukuhlala kwiimvakalelo; Banqwenela amava-ngakumbi awabantu abaza kuthutha imvakalelo yabo bayise kumanqanaba ohlukeneyo olonwabo apho kwenziwa khona iinkumbulo ezingacimekiyo.
Ngelixa itekhnoloji iluncedo olukhulu kobu buntu, ayinakuze ithathe indawo yomntu ochukumisa ukuthembeka, ubushushu kunye nokhathalelo lokwenyani oluhambelana ngokwenyani neendwendwe. Thumela i-COVID-19, olu hlobo lwenkonzo luya kuba yinto entle yokwenene, kwaye ndiyakholelwa ukuba siza kuyikhangela ngakumbi ukuze sizive siphila.
Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba ubunyani bempumelelo kushishino lokubuk 'iindwendwe luya kuchazwa ngeenjongo zethu. Kwaye kwihlabathi apho kugqithisileyo kugqugqisile, abaphumeleleyo iya kuba ngabo bahlala bebeka uvelwano lokwenene, ukucinga kunye nobukrelekrele beemvakalelo kuqala.
Okanye, banokuvula indawo yepitsa…
UJean-Michel Dixte, usekela Mongameli weLizwe, ukutya kunye nesiselo, iDusit International